भरतपुर अपडेट : मतान्तर अझै घट्यो, देवी ज्ञवाली १५३ मतले मात्र अगाडी !
ARCHIVE » भरतपुर अपडेट : मतान्तर अझै घट्यो, देवी ज्ञवाली १५३ मतले मात्र अगाडी !
भरतपुर- भरतपुर् महनगरपालिकाको वडा नं २० को ८ सय मत गन्दा नेकपा एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले ५३ मतले अघि छन् । पछिल्लो अपडेट अनुसार ज्ञवालीले अहिलेसम्म ४२ हजार २०१ मत ल्याएका छन् भने माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहालले ४२ हजार ४६ मत ल्याएकी छन् । भरतपुरको २९ वटा वडा मध्ये २८ वटाको परिणाम आइसकेको छ । २७ मध्ये १४ वटा वडा एमालेले, ११ वटा कांग्रेसले र ३ वटा माओवादीले जितेका छन् । अब वडा नः २० को ३३०२ मत खसेको छ । वडा नः २० पनि कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्र हो । त्यहाँ गत बैशाख ३१ गते नै मतदान भएको थियो ।